‘वडाध्यक्षमा मेरो उम्मेद्धारी वडावासिको चाहना हो’ – नवराज तुम्वापो - Pradesh Dainik
बिहिबार, माघ २७, २०७८ , प्रेम के.डी.
नवराज तुम्वापो पथरीशनिश्चरेमा परिचित नामहो । विद्यार्थी राजनितीवाट उदाएका यी युवा स्थानिय स्तरमा लोकप्रियमात्रै छैनन् त्यहाँहुने साह््रा अप्ठारामा समेत पुग्ने गर्छन् । नेपाल विद्यार्थी संघको पथरी वहुमुखीक्याम्पसको स्ववियु सदस्य वनेका उनी सोहि क्याम्पसका नेवि संघ सभापती समेत रहेका थिए। नेवि संघ मोरङ्गको जिल्ला सभापतीका दावेदार वनेपनि नेवि संघको जिल्लाअधिवेशन नहुदा उनी जिल्ला सभापती भने वन्न सकेनन् । नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला सदस्य रहेका तुम्वापोले कोभिड संक्रमणका वेला फिल्डमा उत्रिएर संक्रमण कम गर्ने सचेतनाका कार्यक्रम गरेका थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलनका कालखण्डमा सक्रिय रहेका तुम्वापो पछिल्लो समय स्थानियतहको निर्वाचन केन्द्रित वनेका छन् । नेपाली काग्रेसको अधिवेशनमा प्राविधिक कारण क्षेत्रीयप्रतिनिधीमा पराजित भएपनि स्थानियवासीमाझ लोकप्रिय र परिचित छन् । नेपाली काग्रेसमा मात्र नभइइतर पार्टीमा पनि त्यतीकै परिचित भएकै कारण यस पटक वडा अध्यक्षका प्रत्यासीका रुपमा हेरिएका छन् ।
पथरीशनिश्चरे ३ नेकपा एमालेको किल्लाका रुपमा देखिए पनि सो किल्ला तोडेर चारतारे झण्डा फराएर इतिहास लेख्ने ध्याउन्नमा रहेका तुम्वापो वडा अध्यक्षका रुपमा टिकट पाउनेमा निश्चिन्त छन् । स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ता मात्र नभई जिल्ला प्रदेश र केन्द्रिय नेतामाझनि परिचित तुम्वापोलाई नेतृत्वले ‘पत्याउने’मा विश्वस्त छन् । एमालेले आफ्नो गढका रुपमा हेर्दाै गरेको क्षेत्रलाई काग्रेसका युवा परिचालनमा उनको भुमिकाकै कारण अहिले त्यहा काग्रेसका युवाको संख्या ह्वात्त वडेको छ । नेपाली काग्रेसका धेरै कार्यक्रम आयोजना गर्ने श्रय समेत नवराजले लिदै आएका छन् । यीनै युवा नेता तुम्वाफोसंग स्थानियतहमा कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता र अवकादिनमा युवा नेतृत्वको आवश्यकता किन भन्ने विषयमा गरिएको वार्तालाप ।
अवआउने स्थानियतहको नेतृत्व कस्तो हुनु पर्छ ?
अव आउने स्थानियतहको नेतृत्व यस्तो हुनु पर्छ कि जसले तलव भत्ता थाप्ने मात्रै नभई जनताका सुख दुःखमा साथ दिने हुनुपर्छ । जहाँवाट जनप्रतिनिधीलाई आफ्नै मेयरले नपत्याउने हैन प्रदेश र केन्द्रमा रहेको वजेट आफ्नो वडामा ल्याउन सक्ने खालको नेताले अव वडाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । मैले अहिले अनुभव गरेको कुरा के भने हाम्रो नगरका कुनै पनि वडा अध्यक्षको पहुच त्यो ठाँउसम्म छैन् । कुनै मन्त्रालयमा गएर लविङ्ग गरेर कुनै विकास निर्माणका योजनाआफ्नो वडामा ल्याए जस्तो लाग्दैन् । मात्र नगरको वजेटको टोकरीमा रहेका वजेट हो हो मा हो हो जसरी कार्यवन्वयन गर्न पनि सास्ती परेको छ । त्यो भन्दा विलकुलै फरक किसीमको नेतृत्वको पथरी शनिश्चरे नगरमा आवश्यकता छ । अवको नेतृत्व युवाले लिनु पर्छ त्यसो भन्दैमा अग्रजलाई गुमराहमा पारेर जान सकिदैन् । अग्रजको अनुभव र युवाको जोसलाई ‘क्यास’ गरेर जान सक्नु पर्दछ ।
काग्रेसको महाधिवेशनमार्फत धेरै युवा नेतृत्वतहमाआइरहदा तपाईलाई चै छुटे जस्तो लागेन ?
यो पटक मोरङ्ग ३मा काग्रेसको अधिवेशन पैसाको चलखेलमा सकियो भन्दापनि फरक परेन । यहाँका निष्ठावान काग्रेसका कार्यकर्ताले अपनत्व नै ‘फिल’ गर्ने पाएनन् । कहिल्यौ काग्रेस नभएका यसै पटक काग्रेसको क्रियासिल सदस्य वनेकाहरुले जित्दै गर्दा त्यही काग्रेस काग्रेस भनेर रगत र पसिना वगाएका कार्यकर्तालाई ‘वाइपास’लगाइयो । अर्का कुरा हाम्रो वडामा डिजाइनवद्ध रुपमा प्रतिनिधी छनौट गरियो । सुरुमा सहमतीको रटान लगाइयो पछि अन्तिम समयमाआएर चुनावी माहौल वनाइयो । प्यानलवनाइयो । कसैको उक्सावटमा पुराना कार्यकर्ताको मानमर्दन गरियो । म मात्र क्षेत्रीय प्रतिनिधीमा नअटाएको हैन पुराना र निष्ठावान कार्यकर्ता पनि ‘वाइपास’भए । यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश नदेला तर पनि अझै पनि वडाको नेतृत्व आफैले जिते जस्तो दम्भ पालेर वसेको छ । त्यो वेला जो प्रतिनिधी वनेर छनौट हुनु भएको छ नि वहाँहरु कोहिमा पनि नेतृत्वमा पुगेर के गर्ने भन्ने समेत अवस्थामा थिएनन् । कोहिमा पनि आफनो मनले आफ्नो आँटले उम्मेद्धार वनेर जित्छु भन्ने आँट वोकेका कोहि नि थिएनन् । तपाई आफै भन्नु त के उनीहरु कसैले वोकेको भरमा कसरी काग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्नु होला? जो वडा सभापतिहुनु भएको छ वहा आफै तिन पटक सभापती भै सक्नु भएको छ । नेतृत्व परिर्वतन को नारा लगाएर मात्र भएन त्यो व्यावहारमा नि देखिनु प¥र्याे । आफै एउटा पदमा वसिरहने अनि केन्द्रमा चै नेतृत्व परिर्वतन हुनुपर्छ भनेर हुन्छ ? अधिवेशनका वेला सिनियर र जुनियरका वखेडा जव राखियो त्यहि वेला लाग्यो यहाँ पक्कै पनि केहि हुदैछ । जो सभापति हुनुहुन्छ नि वहाँले पाटी चलाएको अथवा नेतृत्व लिएको जे भनिरहनु भएको छ त्यो भन्दा अघिवाट नै म काग्रेसको भातृ संगठनमा आवद्ध मात्र थिइन सक्रिय थिए । कसैले विरासतको राजनिती गरिरहदा त्यो वुझ्नु पर्छ कि मैले जनजाती संगठन,तरुणदल, नेविसंघ देखी प्रेस युनियनको जिल्ला नेतृत्वमा वसेर काम गरेको छु । त्यो वेला काग्रेस वनेर वाहिर हिडदा अफ्ठारो थियो त्यो वेला देखि अहिले आएर त काग्रेस हु भनेर गौरव गर्ने हामीले नै त वनाएको हो तर त्यो नवुझने एउटा समुहले गर्दा पराजित वनेको हो तर पनि अहिले पनि वहाँहरु भन्दा वडि सक्रिय नै छु । तल देखीमाथी सम्मको नेतालाई आफ्नो कुरा राख्नगाह्े छैन् ।
आउने स्थानियतहको निर्वाचनमातपाई वडा अध्यक्षमा उम्मेद्धार वन्ने चर्चा छ नि?
उम्मेद्धार वन्ने चर्चा भन्दापनि म उम्मेद्धारको आकाक्षी हु । यो चाहना वा इच्छा भन्दापनि समग्र वडा वासीको चाहनापनिहो । मैले यो दौरान वडाका सर्वै क्षेत्रमापुग्दा पुराना काग्रेस मात्रै नभइ अन्य पार्र्टीकाले पनि म जस्तो युवाले अवको वडा हाक्नु पर्ने हौसला र आर्शिवाद दिदै हुनुहुन्छ । म किन वडा अध्यक्षको उम्मेद्धार भन्दा स्थानिय वाट केन्द्र तह सम्म पहुँच भएको युवानेता हु । अगाडी पनि भनेको थिए वडा अध्यक्ष भनेको मात्रै सिफारीसमा हस्ताक्षर गर्ने हुने होइन परेको वेला वडाका समस्यालिएर सिंहदरवारसम्म पनि पुग्ने हुनु पर्दछ । अहिलेका हाम्रा वडाअध्यक्षको ताल देख्नुभएको छ नि वडामा परेका समस्यावारे माथील्लो लेवलमा पु¥याउन नै सक्र्दैनन् । मात्र कार्यालयमा वसेर अनि केहि कार्यक्रममा अतिथीका रुपमा आशन ग्रहण गर्न मात्र वनाइएको त हैन् होला?
वडा अध्यक्षमान वराजतुम्वापो नै चै किन त ?
म वडा अध्यक्षको उम्मेद्धार वन्ने पहिलो कुरा हो । त्यो पनि काग्रेसको आधिकारीक उम्मेद्धारको कुरा छ त्यसकालागी अरु साथीहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ । सवैभन्दा पहिला त पार्टीको वडासभापती नै वडा अध्यक्षको इच्छुक हुनुहुन्छ तर मेरो धारणा एउटै हो एक पदका लागी एकपटक मात्र उम्मेद्धार वन्नुपर्दछ । पहिला जस्तो म यती पटक यो पदमा उठेको भन्ने त हैन होला । त्यसले सकारात्मक सन्देश दिदैन मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा के भने म त्यो पदमा जिते पनि हारे पनि एक कार्याकाल मात्र हु । त्यो भन्दा माथी वडने हो । दोश्रो कुरा यस पटक मेरो वडाका मतदाताले काग्रेसलाई विश्वास गर्छन भन्ने पुर्ण विश्वास छ त्यसका लागी जित्ने उम्मेद्धारको खोजी काग्रेस कार्यकर्ता र नेताले गर्नेछन् । अधिल्लो चुनावमा पराजित भएकाले पनि वडा सभापतीले फेरी उम्मेद्धार वन्छु भन्ने नैतिकता छैन जस्तो लाग्छ । हारिसकेको मान्छेले फेरी त्यही पदमा दावी गर्न मिल्छ र ?
वडा अध्यक्षहुन चै के भिजन छ त ?
पहिलो कुरा म वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएकै दिनवाट राज्यले दिने कुनै सेवा सुविधा लिनेछैन् । म वडामा रहिरहदा अहिले जुन व्यावसायले मेरो परिवार चलिरहेको छ त्यहि व्यावसायलाई निरन्तरता दिनेछु । पहिलो कुरा नि राजनितीलाई व्यावसायवनाएत्यहि भ्रष्टचार र अनियमितता वडछ तर व्यावसायीहरु राजनितीमाआएत्यो विशुद्ध समाजसेवा वनाउछन् । मैले अहिले पनिकुनै पदमा नरहदापनि समाजमा धेरै कुरामा आड भरोसा गरेको छु । कोभिडले थलिएको वेला फ्रन्टलाइनमा आएर हिजो समाजमासचेतनामात्रजगाइएन सावुनपानीकालागीआवश्यकव्यावस्था गरेको थिए । भोको पेटका लागी राहातवितरण गरेको समाजमाथाह नै छ । त्यो वाहेक पथरीशनिश्चरेको ३ नम्वर वडामा भौतिकपुर्वाधारका साथै खेलकुदविकासकालागीआवश्यककाम गर्ने नै छु । एउटा भिजनलिएर वडा अध्यक्षको उम्मेद्धार वन्दैछु । मैले यो चै भन्न सक्छु नेपालभरीका नमुना वडामा मैले नेतृत्व गरेको वडा हुने छ । मात्रै नगरपालिकाले दिएको प्याकेज वजेट मात्रै वडा विकास हुदैन त्यो भएकाले सिंहदरवार वाट वजेट ल्याएर वडाको विकास गर्ने छु । म हिजो वाटैै व्यावसायक रुपमा राजनिती गरिआएको छु । पथरीशनिश्चरे ३मा एउटा पनि केन्द्रिय स्तरको योजनाले छुन सकेको छैन के यो वडाका जनप्रतिनिधीको नालायकि पन हैन र ?यी यस्ता योजनालाई वडामा भित्राउने मेरो मुख्यकार्य हुने छ । अहिले सम्म वडाका कुनै भित्री वाटो कालोपत्रे छैन्न् अवकादिनमात्यसको अन्त्यहुने छ । अहिलेका जनप्रतिनिधीहरुले विकास निर्माणका ठुला योजनाकालागीपहल नै गर्न सकेनन यो एउटा लाजमर्दा कुरा हो त्यसको अन्त्य गर्न पनि मैले नेतृत्वमाआउनै पर्छ ।
वडाका समस्या चै के देख्नु भएको छ ?
५ वर्ष अघि जनप्रतिनिधी आउनु भयो पक्कै पनि वडावासीले आफ्ना समस्याहल उनीहरुवाट होलान भनेर सोचे तर केहि टिपटापे कामवाहेक केहि पनि सुधार भएको छैन् । जनताका समस्यालाई हल गर्ने नेतृत्व नभएपछि यहि नै हो । अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीका समस्या वडामा ज्युका त्यु छन् । कृषी विकासमा पक्षमा के भए त यो वडामा । वडामा भौतिक निर्माणका समस्या त छन एउटा गतिलो खेल मैदान छैन् । त्यो वाहेक जनताका अन्य समस्या धेरै छन् । ति समस्या समाधान गर्न अहिलेका जनप्रतिनिधी तयार नै भएनन् ।
स्थानियतहको निर्वाचन आउने क्रममा छ । अव आउने निर्वाचनले नेतृत्व परिर्वतन गर्ने नै छ यो पटकको निर्वाचनमा मैले नेपाली काग्रेस वाट वडा अध्यक्षको उम्मेद्धारी दिने छु । त्यसकालागी स्थानिय देखी केन्द्र सम्मको नेतृत्वले पत्याउने काम गरेको छु । यस पटक नगरे कहिले गर्ने त ? त्यहिभएर पनि यो पटक वडाका वासिन्दाले पत्याउने छ भन्नेमा ढुक्क छु ।